5th Town Hall Meeting Invitation-Planning for the Seventh Annual SF Bay Area Thingyan Festival | One Myanmar Community
Home » 5th Town Hall Meeting Invitation-Planning for the Seventh Annual SF Bay Area Thingyan Festival
5th Town Hall Meeting Invitation-Planning for the Seventh Annual SF Bay Area Thingyan Festival
ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဗေးဧရိယာ၏ သတ္တအကြိမ်မြောက် မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကြီးကို ယခုနှစ် ၂၀၁၈ ခု ၊ မေလ (၂၇) ရက်နေ့တွင် ယခင်နှစ်များနှင့်မတူ ပိုမိုစည်ကား သိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေး အတွက် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ဆွေနွေးတိုင်ပင် ပြုလုပ်ရန် ပဉ္စမအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ အစည်းအဝေးကို အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါ၍ သင်္ကြန်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီဝင်များ နှင့်အတူ သင်္ကြန်ချစ်သူ မြန်မာမိသားစုများ အားလုံးကို တက်ရောက်ကြပါရန် ခင်မင်လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
အချိန် : ဧပြီလ ၂၁၊ စနေနေ့၊ နေ့လည်: ၃:၀၀ မှ ၅:၀၀
2018 SF Bay Area Thingyan Festival is only few months away! Please join us as we are planning the festival to ensure we have another successful day of celebration and festivities as we welcome the Myanmar New Year. You are invited to attend fifth Town Hall Meeting of planning for the seventh annual SF Bay Area Myanmar New Year Water Festival which will be held on May 27th, 2018.
Time: April 21, 3:00PM to 5:00PM